Qala Umsebenzi omusha eMpumalanga Ephakathi
Qala Umsebenzi omusha eMpumalanga Ephakathi. Iningi lakho mhlawumbe ufuna umsebenzi eDubai. I-Middle East inikeza okunikezwayo okuningi kwama-expats angobani ukubuka i-Amafutha neGesi, IT, Ukuthengisa, Ukukhangisa kanye Amathuba emisebenzi yehhotela e-United Arab Emirates. Abangaphezu kwamaphesenti angu-80 abafuna umsebenzi abazalwa ku-Emirates. Abaningi babo yizivakashi zamaNdiya nezasePakistan ngaphakathi kwe-UAE. Baqala umsebenzi omusha eMiddle East kudala.
Awukwazi ukufakwa kuphela ngokungeza i-imeyili yakho ngezansi. Udinga ukusebenza kahle ngokwanele ukuze uthole umsebenzi. Ngakho-ke udinga ukubopha kanzima zonke izinsuku zokufuna umsebenzi eMiddle East. Impendulo kuphela yile: Imali ikhona. Indlela ehlakaniphile kakhulu ukungena ngemvume futhi uthole umsebenzi nenkampani yethu e Dubai. Kumakethe namuhla kufanele uzibuze noma ithimba lethu mayelana indlela yokuthola umsebenzi ku-UAE.
Abafuna umsebenzi abaningi kakhulu bangabona izikhangiso kanjani add i-CV yakho uthole umsebenzi. Ngakho sibuyekeza iphrofayela yakho namhlanje, kufanele bhalisa uphinde uthole umsebenzi wakho wephupho ne-Dubai City Company. Inkampani yethu manje okwamanje ukuqasha izikhundla ezehlukene ngaphesheya kwe-United Arab Emirates naseQatar. Noma kunjalo, sinezicelo ezithile ezivela eSingapore, e-Australia, eCanada naseNew Zealand. Sinobuchwepheshe obuningi kanye nokuphatha e Dubai. Futhi lokho kufaka phakathi ukuthengisa nokuthengisa, ukuphathwa kwe-akhawunti, IT kanye ubunjiniyela e-Dubai. Qala Umsebenzi omusha eMpumalanga Ephakathi.
Thola Umsebenzi ngasekupheleni kwenyanga
Sicela ungeze i-imeyili yakho ngezansi futhi sizozama ukukhetha kuhlu lwakho ekupheleni kwenyanga noma ngenye indlela ubheke iwebhusayithi yethu engxenyeni yokulayisha. Ukuphela kokufanele ukwenze ukubheka emaphaketheni ethu ahlukahlukene futhi nezinsizakalo kuwebhusayithi yethu ukubona ukuthi yini elungelayo. Sinezikhala eziningi zemisebenzi ezivulekile e-Australia, New Zealand, Canada nase-United Arab Emirates.
Inhloso yethu ukukwenza Isixazululo somsebenzi kubantu abasha abasuka e-Dubai City. Qala ukujaha umsebenzi wakho wamaphupho futhi sicela ubhalise neDubai City Company. Iqembu lethu libheke phambili ukukuxhuma nabamele bethu beDubai Company futhi likubeke e-UAE. Chofoza bese ulandela amaphrofayili enkampani yethu futhi uthumele isimemo enkampanini yethu. uxhumane nathi ngokuqondile namuhla futhi uhlole ukuthi yini esingakwenzela yona.
Kungakhathaliseki ukuthi uvelaphi, sisiza emhlabeni wonke. Ngokwesibonelo, abantu basePakistan bayakwazi ukuqala umsebenzi. Ngakho-ke, empeleni, kungakhathaliseki ukuthi uvelaphi, inkampani yethu izokwazi ukukusiza ukuthola umsebenzi e-United Arab Emirates. Ngesikhathi esifanayo, ungasesha futhi amanye amazwe. Esinye sezibonelo yi-Qatar futhi Izinkampani zase-Saudi Arabia eziqashisayo.
Layisha kabusha Qala ukuqalisa umsebenzi e-Dubai!
Ingabe ufuna ukuthola umsebenzi ku- I-Dubai Inkampani qala ngokuhlola abachwepheshe! Ithimba lethu lisebenza kwesicelo ngasinye ukuphatha amathuba emisebenzi emangalisayo. Omunye wemisebenzi emihle esinikezayo esiyihlinzekayo imisebenzi yokukhangisa imisebenzi kubafundi abasanda kuthweswa iziqu.
Enye iphuzu eliyinhloko emsebenzini wakho ungaqala namhlanje. Thola umsebenzi wakho wephupho e-Emirates. Futhi nakanjani Qala Umsebenzi omusha eMpumalanga Ephakathi. Izindawo okufanele uqale ngazo Izinkampani zokuqasha eGulf. Umsebenzi we-Careerjet esifundeni seGulf futhi Phezulu kule website yokuqasha eGulf. Kufanele ngempela ukusebenzisa ne-CV yakho.
With Dubai Company Inkampani unga Qala Umsebenzi omusha eMpumalanga Ephakathi!.
Layisha kabusha edolobheni elikhula ngokushesha kunawo wonke emhlabeni !. Sisiza futhi UFiliphu uyazama ukuthola Imisebenzi e Dubai.
Izinkampani zase Dubai - Qala umsebenzi omusha eMpumalanga Ephakathi
I-Dubai City Company isungulwe ku-2019. Kodwa kufanele sikhunjulwe ukuthi inkampani yethu yokuqasha. Kuzo zonke izimo, nsuku zonke yenza imisebenzi yokuphenya imisebenzi hhayi iDubai kuphela. Kepha futhi namazwe e-GCC. Ukuveza amakhasimende ethu aqhamuka emazweni angaphezu kwe-30. Inkampani Dubai City ixhumanisa ochwepheshe bokufuna umsebenzi nabaqeqeshi. Ukubeka ngenye indlela, iqembu lethu elihlinzeka ngosizo lokufuna umsebenzi ngocwaningo lwekhono lesifunda imininingwane eDubai.
Ngaphansi kwalezi zimo, umgomo wethu ukukhetha kuqala ukushintshwa okusheshayo ukuqasha kanye nokuqasha imisebenzi emakethe yowesifazane. Ngethemba lokuthi isiteji sethu sokusesha umsebenzi sikwenza abafuna umsebenzi bomhlaba wonke kanye nabazosha. Ngokuvamile ukuthi kufakwe ithuba elimangalisayo lomsebenzi edolobheni elikhula ngokushesha kunazo zonke emhlabeni. Kuze kube sesikhathini samanje, kunama-1,000 abaqashi bezwe abadume kakhulu kanye nezinkampani e Dubai.
E-Dubai, ungathola imisebenzi ekhokhelwa kahle e-UAE. Ungasesha imisebenzi e-Porsche e-Dubai. Kukhona nezinkampani eziningana eziqasha Dubai e-2018. Ukuze sikubeke ngenye indlela, silapha ukuze sikusize uqale umsebenzi e-Dubai. Ukubuka ku Qala Umsebenzi omusha eMpumalanga Ephakathi ?. Layisha Qalisa kabusha enkampanini Yezindiza ye-Emirates noma inkampani yethu!
Inqobo nje uma zonke izinkampani zaseDubai zisebenza kuzo zonke izimakethe ezinkulu ze-4: Ukuqashwa, Umnyango Wabasebenzi, Imisebenzi Kahulumeni, Ukuphathwa Kwemisebenzi. Iqembu lethu kungekudala lizokwazi ukukubeka e-Dubai. Ngaphandle kwezinkinga, ikakhulukazi e-UAE. Ngaphezu kwalokho enye yezindlela ezinhle zokuthola umsebenzi iwukuba thola inkulumo ehamba phambili e-UAE.
Uma wenza ucwaningo oluhle lomsebenzi e-Dubai. Kufanele nakanjani ucabange ukufundisa imisebenzi e-UAE. Le misebenzi yiyona eshesha kakhulu ukuyithola futhi kulula kakhulu ukuyidlulisa kungxoxo. Umsebenzi omusha eMpumalanga Ephakathi kuhlala kuvulekele izifiki ezintsha. Futhi umsebenzi e-Abu Dhabi indlela ehlakaniphile yokwenza inani elifanele lemali engenayo. I-Qatar ne-Kuwait nazo ziyindawo enhle yomsebenzi.
Ukuthuthela eMpumalanga Ephakathi njalo kuyinto enzima kakhulu. Ukuthuthela e-Dubai njenge-expat njalo uthatha isikhathi nomzamo. Kungakhathaliseki ukuthi uzozama kangakanani ukuzama ukukufinyelela. Uhlelo lufana nanoma yiliphi izwe eMpumalanga Ephakathi. Qala Umsebenzi omusha eMpumalanga Ephakathi ngokusebenzisa inkampani yethu.
Abathunywa njengabasebenzi abasha e-UAE
I-Dubai City Company inikeza amalungu ayo umthombo ongenakulinganiswa Ulwazi lokusesha umsebenzi lwe-Emirates. Inkampani yethu yehlukile kunabanye. Ngoba sithumela kugcwele okunamandla nokuqukethwe okwangempela. Ukukusiza nje qala umsebenzi omusha. Ipulatifomu yokusesha imisebenzi kaJobe inikezela ngamanethiwekhi omhlaba wonke kuyo yonke indawo e-Dubai. Uhlelo lwethu lwenzelwe ukuthuthukisa amaphrofayli abafuna umsebenzi. Ukusiza izinkampani ukuthola umsebenzi omusha. Futhi nge izinsiza ezifanele zokucwaninga ngomsebenzi eDubai.
Abathunywa bevela phesheya beza e-United Arab Emirates. Iningi labo ukuvakashela u-UAE ukuthola umsebenzi wokufuna umsebenzi futhi ekugcineni, yi-20% kuphela yabo ethola umsebenzi. Ngakho-ke, uma ngabe kukhona ama-expats amasha afuna ukubekwa eDubai. Udinga ukusebenza kanzima kanzima ukuyitholela amaphrojekthi amasha. Iqembu lethu elenza konke kungenzeka ukuthi likwazi ukuphuma liwasize ngokufuna umsebenzi. Isazi Qala Umsebenzi omusha eMpumalanga Ephakathi.
IDubai City Company manje isebenza kanzima ukubeka yonke ukhetho ukuthi sithola. Akunandaba noma zivela eNdiya noma eSouth Africa. Abaphathi bethu basebenza kahle kubo bonke abafuna umsebenzi. Ithimba lethu lochwepheshe nalo lidaliwe Amaqembu we-WhatsApp Dubai. Futhi empeleni, lokhu kuye kwasiza abangaphezu kwe-20,000 abafuna umsebenzi ku-UAE.
Ochwepheshe bethu bokuhlola umsebenzi bawuchwepheshe bezeluleki beqiniso
Ukusekela nokubika ngokufuna kwakho umsebenzi into esemqoka. Inkampani yethu yenze ukuqeqeshwa okusebenzisana kuzo zonke izihloko ezahlukahlukene. Ngoba iDubai yindawo enhle kakhulu yokusebenza, ikakhulukazi yokuthengisa. Futhi, kufanele ucabangele umsebenzi wokubhange mkhakha. Ngenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuphuma kubantu abangathanda ukubekwa e-Emirates.
Ngaphandle kokulibaziseka, i-Dubai City Company isize ngaphezu kwe-150,000 + abafuna umsebenzi emhlabeni jikelele. Okwamanje abethuli bethu be-expat bayeza kuze kube manje abavela emazweni ahlukahlukene we-70. Ekuhlaziyeni kokugcina, inhlangano yethu ikunikeza amathuba akhethekile ukusebenzisana nabaqashi e-UAE. Ikakhulu uma wakhela iphrofayili yakho yomsebenzi futhi uthole okuhlangenwe nakho okubalulekile eqinisweni ukuze ukhulise iholo lakho.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi abaholi bemibono abanamandla. Futhi-ke, abenzi bezinqumo nabosomabhizinisi bafuna kuphela abazoqokwa kakhulu. Ngasohlangothini oluhle, ungaba inhliziyo yomkhakha waseDubai City. Uma unesipiliyoni esanele emakethe yomhlaba wonke. Ungawuthola nakanjani umsebenzi e-United Arab Emirates. Isibonelo, iningi le Izisebenzi zaseNdiya zizimisele ukusebenza e-Dubai. Ngakho uma uvela e-India uzoba nethuba elikhulu lokusebenza njenge-expat. Qala Umsebenzi omusha eMpumalanga Ephakathi futhi Layisha kabusha.
Ama-Recruitment Agencies e-UAE
Ungalichitha isikhathi sakho ukuthumela okuqhubekayo kwakho kubasebenzi abaqashile. Ngithumele kuphela ama-ejenti amahle kakhulu wokuqasha e-UAE. Udinga ukulungela ukuthola indlela yokuthola imisebenzi eDubai. Bese uqala umsebenzi omusha eMiddle East super ngokushesha okukhulu. IDubai City iyindawo emangalisa ngempela yokuhlala nokusebenza. Kepha ukuthola umsebenzi lapho futhi ukwazi ukuphatha impilo yakho. Udinga ukuhlakanipha kakhulu kukho konke okwenzayo. Ubufakazi obuqand 'ikhanda bokuthi kukusiza ukuba usebenze umsebenzi yi-resume yakho.
Ama-Recruitment Agencies e-UAE ngibheka ngaphezulu kwe-500 CV's nsuku zonke. Kuningi, ngasohlangothini olubi wena, akuwena wedwa ongenamsebenzi. Abafuna imisebenzi abangaphezu kwe-95% bangathanda ukuqala umsebenzi omusha eMiddle East lapho. Thola imisebenzi emisha eMpumalanga Ephakathi esuka eNdiya. Qala Umsebenzi omusha eMpumalanga Ephakathi.
Uma lokho kungaba lula kakhulu njengoba kuzwakala ukwenza. Sekela kulokho inkampani yethu isiza ukufinyelela nokuphatha wonke umenzeli wokuqashwa. Ngasikhathi sinye isicelo sakho sihlolwe ngokucophelela. Ngoba uyi- ofuna umsebenzi futhi i-ejenti yokuqashwa nguyena kuphela ongakusiza ekutholeni umsebenzi. Kuningi imisebenzi yomsebenzi ongayenza i-Google yona.
Ukuze uyibeke ngenye indlela, kuzothatha cishe izinyanga ezingu-3 ukuze uthumele i-CV yakho. Futhi ezinye izinyanga ezingu-3 zithumela imininingwane yakho yesicelo Izinkampani e Dubai. Ngokolunye uhlangothi, abaqashi ube nama-8-12 amasonto ukubeka ukhetho. Noma kunjalo kubalingani bamazwe angathatha isikhathi eside.
Dubai imisebenzi Guides
Indlela enhle yokwenza ubambe umsebenzi ngokushesha usebenzisa izinkombandlela zethu zemisebenzi ye-Ghuba. Ungathola umsebenzi omuhle kakhulu kuphela ngokusebenzisa kwethu WhatsApp emaqenjini eDubai. Ithimba lethu labaphathi lenze amaqembu amangalisayo eDubai. Sisiza ukuthi ama-expats amasha abekwe e-United Arab Emirates. Isicelo esisha sokuqashwa kuthunyelwa nsuku zonke kumhlahlandlela wethu waseDubai.
The Whatsapp Dubai izixhumanisi zeqembu zenzelwe abafuna umsebenzi emhlabeni wonke. Ikakhulukazi kubantu abanokuhlangenwe nakho okuhle. Isibonelo, uma ukhona Ukuba ne-MBA ungathola umsebenzi e-Dubai. Unalokhu engqondweni, ungabekelwa imisebenzi enikezwa amaholo ephezulu eDubai. Inkampani yaseDubai City iyazi ngokweqiniso ngebhizinisi lokuqasha le-WhatsApp. Ikakhulu uma sikhuluma nge-Middle East.
Ngakolunye uhlangothi, ungabuye usihlole WhatsApp for imisebenzi ingxenye. Futhi kuthunyelwa ku-Resume yakho emazweni amaningi kuma-Guides ethu. Ngokuhlola iqembu lonke lezidingo zokuqashwa kwe-WhatsApp. Ungabona kahle ukuthi ngubani ongaqashwa futhi ongakwazi. Qala Umsebenzi omusha eMpumalanga Ephakathi nenkampani yethu !.
Ukufuna imisebenzi e-Dubai ngendlela ehlakaniphile
Enye indlela ehlakaniphile yokuya thola izithuba e-Dubai. Ukuthumela isicelo esingaka ezinkampanini eziningana. Isibonelo, ungasebenzisa insiza yokusabalalisa kabusha ukubeka Ukudonswa kwamazwe omhlaba eDubai City. Lapho, eqinisweni, kunemisebenzi eminingi kakhulu enikezwa abathengisayo eMiddle East. Iqembu lethu selidalile umhlahlandlela wokuthengisa iphrofayela yakho e-Dubai. Ukugqugquzela kuyisihluthulelo sokuthola umsebenzi e-UAE.
Ngakolunye uhlangothi, i umsebenzi weselula ukusesha kuyoba umqondo ohlakaniphile wokubhekana nawo. Sisiza futhi imisebenzi eDairobi yabesifazane baseNingizimu Afrika E-Dubai bayakwazisa loluhlobo lwama-expats.
Ungalokothi udikibale futhi unenhlanhla ngokufuna umsebenzi wakho eMpumalanga Ephakathi!